EX - ABSDF: September 2016
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဒေါ်လာအတု ပြုလုပ်သော လိုက်ဘေးရီးယား နိုင်ငံသားကို ပတ္တမြားအတု သယ်ဆောင်မှုအတွက်ပါ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ထပ်မံ ချမှတ် မောင်တောမြို့နယ်မှာ WFP ရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီတွေ ရပ်ဆိုင်းမည်
Ye Myint Kyaw·Monday, September 26, 2016
(၉) နှစ်ပြည့်သွားပေမယ့်လည်း မျက်စိထဲမှာ မနေ့တစ်နေ့ကလို..။ အဲဒီအချိန် အဲဒီကာလဟာ မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ စစ်တိမ်သလ္လာအောက်မှာ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်မိုက်နေချိန်။ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ အစောပိုင်း ပခုက္ကူသံဃာတွေကို စစ်တပ်က ရိုက်နှက်မှုအတွက် တရားမျှတမှု တောင်းဆိုဖို့ ရခိုင်နဲ့ ရန်ကုန်က ရဟန်းပျိုတွေ လမ်းပေါ် စထွက်လာပါတယ်။ တဆက်ထဲ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတွေကိုပါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းပေါ်
အညီအညာ စီတန်းထွက်လာတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေရဲ့ နှုတ်ဖျားမှ ရွတ်ဆိုတိုင်သံတွေက နိုင်ငံရေး ကြွေးကြော်သံတွေထက် မေတ္တာပို့သံတွေ ပိုလွှမ်းမိုးနေတာကဖြင့် အလွန်အံ့ဩ ကြက်သီးမွှေးညှင်းထစရာပါ..။ ကြားရသူတိုင်းရဲ့ ရင်နှလုံးကို ယမ်းခါလှုပ်နှိုးလိုက်ပြီး လမ်းဘေးဝဲယာရပ်ကြည့်သူ ဘာသာပေါင်းစုံဟာ သံယာတွေ စီတန်းလမ်းလျှောက်တဲ့နောက် ၀န်းရံသူတွေအဖြစ် လက်ချင်းဆက် လိုက်ပါသွားပါတယ်။
နေ့စဉ်ရက်ဆက် သံဃာလမ်းလျှောက်တာ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံဖြစ်လာပြီး မေတ္တာသံတွေ
ညံလာတဲ့နဲ့အမျှ စစ်တပ်ရဲ့ ဖြိုခွင်းမှုကလည်း မြန်ဆန်လာပါတယ်။
Min Ko Ko CNN ။ ။ လူအများကို နားလည်ရခက်နေစေတဲ့ မေးခွန်းကနေ ကျနော် စမေးရမှာပါဘဲ ။ ဒေါ်စုတို့ နိုင်ငံကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ ။ SUU ။ ။ တရားဝင် အခု Myanmar လို့
ခေါ်ပါတယ် ။ အရင်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လို Burma လို့ ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကိုဘဲ ကျမတို့ဘာသာစကားနဲ့ Myanmar လို့ ပြောဆိုရည်ညွှန်းကြပါတယ် ......မြန်မာဆိုတာ
ကျမတို့အသံထွက်ဆိုပါတော့ ။ CNN ။ ။ ကုလသမဂ္ဂမိန့်ခွန်းမှာ ဒေါ်စုက Myanmar လို့ သုံးခဲ့တာကို ကျနော်သတိထားမိလို့ပါ ။ အရင်ကဆို Burma လို့ဘဲ သုံးလေ့ရှိတယ်လေ ။ ဒေါ်စုရဲ့လက်ရှိအနေအထား ရာထူးကြောင့် တမင်တကာ ပြောင်းသုံးခဲ့လား ။
ထိခိုက်နစ်နာအောင် ဆဲရေးတိုင်းထွာကြတဲ့အခါ အမိကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း၊ အဖကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း၊ အမျိုးဇာတိကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း ဆိုပြီး ရှိပါသတဲ့။ တိုင်းပြည်ကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲရေးခြင်းဆိုတာ ရှိလာရင်တော့ တော်တော်ကို မခံချိမခံသာ ဒေါသထွက်စရာကောင်းမယ့် ဖြစ်ရပ်ပေပဲ။ ဒါပေမယ်လို့ ဆဲရေးတဲ့အခါ အဆဲခံရတဲ့သူဘက်မှာ တဘက်က ပုတ်ခတ်ဆဲဆိုနေသလို မဟုတ်ပဲ အပြစ်အနာအဆာ ကင်းနေလို့ရှိရင် သူ့ဘာသူ ဘာကြီးနဲ့ကိုင်တုပ်တုပ် သူသာလျှင် ကျက်သရေယုတ်ရမယ့် အဖြစ်မျိုးပါ။ ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းက “အသင်ပုဏ္ဏား ဆဲရေးသမျှကို ငါဘုရား မခံယူသဖြင့် သင်ပိုင်ပစ္စည်းသာ ဖြစ်တော့သည်။” လို့ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သလိုပေါ့။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ အပနာမ ပြောကြပလေ့စေ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သင်္ကာရှင်းနေလို့ရှိရင် ဘာမှတုန့်ပြန်ပြောဆိုနေစရာ မလိုပါဘူး။ ပိန်းကြာဖက်မှန်ရင် ရေမတင်ဘူးတဲ့။ “ပွတ်လေလေ ဂူရွှေမှာ အရောင်ထွက်တယ် ရှေးကထက်ကဲ” ဆိုတဲ့ ပတ္တမြားရွှေဂူ ကဗျာလည်း ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား။ အဲ့ဒီတော့ တစုံတယောက်ကများ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကို အောက်တန်းစားတွေ နေတဲ့တိုင်းပြည်ပါ လို့ လာရောက်ဆဲရေးခဲ့ရင် ဘာမှ ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ Read more »
"နိုင်​ငံ​တော်​၏ အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​ ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဟားဗတ်မိန့်ခွန်း"
ဒီဆုကို ကျမဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအတွက် အသိအမှတ်ပြုပြီးပေးတာလို့ရော၊
အနာဂတ်မှာ ကျမတို့ ရအောင်ကြံဆောင်ရမယ့်အရာတွေအတွက် အတိတ်နိမိတ်ကောင်းအဖြစ်ပါ ကျမ သဘောထားပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်မှုရော၊ လုံခြုံမှုရော ရှိနေပြီလို့ ပြောနိုင်တဲ့အထိရောက်ဖို့ အဝေးကြီးလိုသေးလို့ပါ။ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့လုံခြုံခြင်းကို မျှမျှတတရဖို့ ဆိုတာ ဘ၀မှာ လူတွေ အတောင့်တဆုံးအရာတွေပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျမဒီလိုလာနိုင်အောင် အခွင့်အရေးပေးခဲ့ကြတဲ့ လူကြီးမင်းတွေရော၊ ကျမကို ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့သူတွေရော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။
စင်ကာပူထီထိုးခြင်းသည် လောင်းကစားအက်ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းကြောင်း အောင်ဘာလေညွှန်မှူးဦးထွန်းထွန်းအောင်ပြော
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေဒီယို တယ်လီစကုပ် ဖွင့်
ဂျော်ဒန် စာရေးဆရာ သတ်ဖြတ်ခံရ
ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ ညွှန်ကြား ချက်တွေနဲ့အညီ လိုက်နာမယ်လို့ ရိုးရိုးလေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ခံဝန် ကတိပြု
Aimstar Network တာဝန်ရှိသူကို အရေးယူနိုင်ဖို့ သတင်းသမားတွေ လက်မှတ်စုဆောင်း
မြို့နယ် ၃၃မြို့နယ်ရှိ နောက်ဖေးလမ်းကြားများကို ဆက်လက်ရှင်းလင်းမည်
ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား အများပိုင်ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာများ ရောင်းချမည်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်း ဂီတာငှားရာမှ ဓားထိုးမှုဖြစ်
ဆိုင်ကယ်ချင်းယှဉ်စီးပြီး ရွှေဆွဲကြိုးဖြတ်ယူလုယက်သူ သုံးဦးအားဖမ်းမိ
Zarni Tike with Tike ZN.
ဥက္ကဋ္ဌကြီး၊ ဂုဏ်သရေရှိ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ လူကြီးမင်းများရှင့်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရသစ်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ဒီအထွေထွေ ညီလာခံမှာ စကားပြောရင်း ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဉာဏ်စာတမ်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မူတွေအပေါ်မှာ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ပြောကြားရတာဟာ ကျမရဲ့တာဝန်၊ ကျမရဲ့ အခွင့်ထူး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ခွန်အားဟာ ပဋိဉာဏ်စာတမ်းနဲ့ နိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့ အခြေခံမူတွေမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ တကမ္ဘာလုံးလွှမ်းခြုံအကျုံးဝင်မှုနဲ့ တရားဝင် ဖြစ်မှုတို့အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံမှု မရှိခြင်းနဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးဟာ ကျမတို့အားလုံးရဲ့ ပိုမို ငြိမ်းချမ်း၍ သာယာဝပြောတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ရေး၊ ဂရုဏာတရား ထွန်းကားတဲ့ လူသားအားလုံးရဲ့ နေရာထိုင်ခင်းဖြစ်မြောက်ရေး ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို သိုမှီးထားတဲ့ အဖွဲ့ကြီးအဖြစ် ရှိနေဆဲပါ။
အမေရိကန်သမ္မတတွေထဲလည်း နာမည်မကြီးတဲ့ သမ္မတတွေရှိတယ် ဘုရားတွေထဲလည်း နာမည်မကြီးတဲ့ ဘုရားတွေရှိတယ်
သမီးနှင့်သား - ဒီတစ်ပတ်တော့ သမီးနှင့်သား မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို သတိရလို့ ဆက်ရက်ကလေးတွေအကြောင်း ပြောပြ ပါမယ်။ ဦးဦးဟာ တတ်နိုင်သရွေ့ ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ သားတို့ကို ပြောလေ့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းကတော့ ထောင်ထဲဖြစ်စဉ်ပါမှ ဖြစ်မှာမို့ သည်းခံကြပါ။
Tin Hlaing မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂျီဒီပီမှာ ဒေသတွင်း အလွန် နည်းပါးလျက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံလူဦးရေ
၅၄ သန်းအနက် သန်း ၂၀ မှာ သွားလာဆက်သွယ်ရန် ခက်ခဲသည့် အခြေအနေတွင် နေထိုင်နေရသည်။ စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်မြို့တွင်ပင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ငွေကြောင်းဖောင်းပွမှုနှုန်း မြင့်မားနေပြီး
ဆန်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ကိုလိုနီခေတ်ထုတ်လုပ်မှုထက်ပင် လျော့နည်းလျက် ရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံထံမှ ထောက်ပံ့မှုများ ဆက်လက်ရရှိရန် ၊ ရုရှားနှင့် စစ်ရေးဆက်ဆံမှု ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
တာယာပန်းတွေ ပွန်းမှာကြောက်ရင် ပြိုင်ဘီးကောင်းမဖြစ်နိုင်သလိုပေါ့ . တာဝေးပြေးစဉ် ဘယ်ပါးပြင်မှ နံ့သာမတင်နိုင်ဖူးလေ
ရခိုင်ပြသနာနှင့် ရာဇာပလ္လင် ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး) U Hla WinFollow
၂၁ ပင်လုံ ညီလာခံ ပြဿနာ…။ နောက်… ဒီနေ့ ရခိုင်ပြဿနာ…။ ဒီပြဿနာ (၂)ခုအကြောင်းကို ကျွန်တော် လုံးဝ စာမရေးချင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ အားနာလို့ ခင်ဗျား။ အစိုးရ… စစ်တပ်… နောက်… ဦးဆောင်နေကြတဲ့ တာဝန်ရှိသူနှင့် သက်ရောက်နေသူအားလုံးကို အနှောင့် အယှက် မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
ဗိုလ်စိန်မှန်ကို အားနာတယ်။ သရဝဏ်(ပြည်) Zawana Shen
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အမျိုးသားရေးတက်ကြွသူအချို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူမှုရေးလိုလို ၊ဘာသာရေးလိုလိုအဖွဲ့ ကြီးတစ်ဖွဲ့ က အတိုက်အခံလိုလိုဘာလိုလိုရပ်တည်လာပါတယ်။ တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္စဘာသာပြန့်ပွားရေးအတွက် ဗုဒ္စဘာသာကလျာနယုဝ( YMBA) ၊ မလွန်ဆန်လှူအသင်းကြီး ၊ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ် စတဲ့ အသင်းအဖွဲ့များစွာပေါ်ပေါက်ဖူးပေမယ့် အခု အဲဒိအဖွဲ့ ကြီးလို ကိုယ့်တနိုင်ငံထဲသားချင်း အဖွဲ့တဖွဲ့ဘက်ကရပ် ၊ အခြားအဖွဲ့ တဖွဲ့ကို
ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး ။ နိုင်ငံရေးမှာ အတိုက်အခံဆိုတာ အစိုးရဘာလုပ်လုပ် ကန့်လန့်တိုက်အပြစ်ပြောနေရုံလောက်တင်မကပါဘူး ချီးကျူးစရာရှိတာကိုချီးကျူးမယ် ၊ ပူးပေါင်းစရာရှိတာကိုပူးပေါင်းမယ် ၊ ဆန့်ကျင်စရာရှိတာကိုဆန့် ကျင်ရပါမယ် ။ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ချီးကျူးစရာရှိရင်ချီးကျူးမယ်ဆိုတာကတော့ အခုလက်ရှိ လူမှုရေးလိုလို မျိုးချစ်လိုလို အဖွဲ့ ကြီး နဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာဝေလာဝေးပါပဲ ။ ဘင်္ဂလီအရေးမှာ လက်ရှိ အစိုးရ ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုခါးခါးသီးသီးဆန့်ကျင်နေကြတဲ့သူတွေဟာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဥပဒေပြုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို.နယ်အတွင်း ငွေတစ်သောင်းတန် အတု သိန်းလေးဆယ်ကျော်အားလှည့်လှယ် သုံးစွဲနေသူများအား ဖမ်းဆီးရမိ
မောင်တောတွင် မူးယစ်ဆေးပြား သိန်း ၆၀ ကျော်ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ
မောင်တောခရိုင်အတွင်း တရားမဝင်ဆောက်လုပ်ထားသော ဗလီအပါအ၀င် အဆောက်အဦများကို ဖျက်သိမ်းမည်
မြိုင်ကြီးငူ-မဲသဝေါလမ်းတစ်လျှောက် ယနေ့ ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီဟု BGF ပြော
ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားရန် ဆိုတဲ့ ပြဌာန်းချက်ကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြု
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ် သုံးဦးဒဏ်ရာရ
ဘာလင် ရွေးကောက်ပွဲ၊ မာ့ကဲလ်ရဲ့ ပါတီ ရှုံးနိမ့်
နယူးယောက် ဖောက်ခွဲမှု သံသယရှိသူ ရဲက ထုတ်ပြန်
ကျောက်သင်ပုန်း - အထွေထွေမှတ်စု
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး စိတ်အထိခိုက်ရဆုံး အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခု .....
‎ ရင်ထဲ မှာ တမျိူးကြီးဗျာ
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကိုအတော်များများ ဖတ်ခဲ့ဘူး ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာမှစိတ်အထိခိုက်ရဆုံး အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုကိုစွဲစွဲထင်ထင် မှတ်မိနေတယ်။
ပထမတစ်ခုက သခင်အောင်ဆန်းအဖြစ်နဲ့တက္ကသိုလ်ကထွက်၊ တို့ဗမာအစည်း အရုံးထဲခြေစုံပစ်ဝင်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလုပ်နေချိန်။ Read more »
(၂၁) ပင်လုံညီလာခံအချိန်မှာနှလုံး သွင်းသင့်သည့်ဂျပန်ပုံပြင်။ “ရွှေဒင်္ဂါးပြား ရှုံးသွားသလား မြတ်သလား”
ရှေးတုန်းက ဂျပန်ပြည်မှာ ခုခေတ် တိုကျိုမြို့တော်ဖြစ်လာမယ့် အဲဒိုဆိုတဲ့ မြို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိုမြို့က တာတာမိ မြက်ဖျာရက်တဲ့ ဆာဘုရိုဘဲဆိုသူဟာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အတွက် ပိုက်ဆံ ရွှေဒင်္ဂါးသုံးပြား သွားချေးခဲ့တယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ငွေချေးပြီး အပြန်လမ်းမှာပဲ ပိုက်ဆံအိတ် ကျပျောက်သွားပါတော့တယ်။
ဆာဘုရိုဘဲဟာ အိမ်ပြန်ရောက်မှ ပိုက်ဆံအိတ် ကျပျောက်ခဲ့မှန်းသိပြီး ဆုံးပြီလို့ပဲ စိတ်လျှော့ထားလိုက်ပါတယ်။
သူကျကျန်ခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို လက်သမားဆရာ ချောဂျိရိုက ကောက်ရတယ်။ Read more »
●သရေခေတ္တရာပထမမင်းဆက်၊ ●သရေခေတ္တရာဒုတိယမင်းဆက်၊ ●ပုဂံမင်းဆက်၊ ●ပင်းယမင်းဆက်၊ ●စစ်ကိုင်းမင်းဆက်၊
Kyaw Thurein ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက
အင်မတန်ရက်စက်တဲ့ ဓါးပြကြီးတစ်ယောက်က ရွာလေးတရွာကို ဓါးပြ၀င်တိုက်သတဲ့ ၊ ဓါးပြဆိုမှတော့ ဘယ်မေတ္တာတရားရှိမလဲကွယ် ရွာထဲရှိတာ အကုန်သိမ်းကြုံးယူသွားတာပေါ့
၊ မကြည်ဖြူလို့ မပေးချင်တဲ့သူဆိုရင် သူက ဓါးနဲ့ ပိုင်းပစ်တော့ သူယူသမျှပေးလိုက်ကြရတာပေါ့ ၊ ဒီလိုနဲ့ ရွာကနေ ဓါးပြကြီး ထွက်သွားတော့ သတ္တိရှိပြီး ဇွဲကောင်းတဲ့ အမေအိုကြီးတစ်ယောက်က လူငယ်တွေကို ခေါ်ပြီးပြောသတဲ့
၊ ကဲလူလေးတို့ရေ ဒီဓါးပြကြီး ဒီလောက်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးသယ်ပြီး တယ်ဝေးဝေးတော့သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး သူပင်ပန်းတဲ့အခါ ချခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းလေးများ
ဒို့ ပြန်ရအောင် လိုက်ကြရအောင် ခေါ်သတဲ့ ၊
မဇ္ဈိမသတင်းဌာနသို့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးဝင်းထိန်၏ ဖြေကြားမှု အပြည့်အစုံ
ရှမ်းပြည်နယ် ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်တချို့ တာဝန်ရပ်စဲ
မောင်ဖြစ်သူ ဘုရားပေါ်၌သေဆုံးခဲ့မှုနှင့် ပက်သက်၍ အစ်မဖြစ်သူမှ တိုင်ကြားအမှုဖွင့်
ဆီးရီးယားမှာ ဆက်တိုက် ဗုံးခွဲ၊ ၄၀ ကျော် သေဆုံး
အုတ်ခဲဖြင့် လူကို ထုသတ်ပြီး ထွက်ပြေးသူအား ဖမ်းဆီးရမိ
မြောက်ကိုရီးယား ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ၃ခု ထပ်ပစ်
ဟောင်ကောင် ရွေးကောက်ပွဲ၊ လူငယ်အချို့ အမတ်နေရာရ
ရှမ်းပြည် NLD ပါတီခေါင်းဆောင် ၆ ဦး ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားခံရတဲ့ ကိစ္စ ဦးဥာဏ်ဝင်း မသိရှိကြောင်း ပြော
နမ်ခမ်းမြို့နယ် မန့်ဟောင်းကူးတို့ဆိပ်တွင် စက်လှေပေါ်မှကုန်တင်ကား တစ်စီး ရွှေလီမြစ်ထဲချော်ကျ စက်လှေသမားနှင့် ကားဒရိုင်ဘာ ပျောက်ဆုံး
အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဖြင့် ယီမင်၌ အယ်လ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့ ဝင် ၆ ဦးသေဆုံး
လွမ်းချင်းလည်း ငါ မဆို အိုင်ချင်းလည်း ငါမရေး အဲချင်းလည်း ငါ မသီ ခု ငါ့တိုင်းပြည်အတွက်
"မျှော်ချင်း "သက်သက် ကဗျာသစ် ရင်ထဲက ကို ဖြစ်တည်လာ ဆွေ မြန်မာတို့ထံ စာသဝဏ်။
ဒီနေ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များ
၊ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တကွ ယခုလိုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့နဲ့အတူ စိတ်အားဖြင့်ရှိနေတဲ့ ပုဂိုလ်များအားလုံး နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆန္ဒအဝဝနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ ကျွန်မစပါရစေ။
ဖားကန့်မှ အထက်တန်းကျောင်းသူ မဂျာဆိုင်းအိမ်၊ ကျောင်းက အိမ်အပြန်၊ လမ်းတွင် သေနတ်သံများကြား လဲကျ၊ အသက်ဆုံး သွားရ။ နောက်ဘ၀များတိုင် သူ့စိတ်ထဲ ကျောင်းသွားလျှင် သေနတ်မှန် သေတတ်သည်ဟုများ စွဲမှတ်သွားလေမည်လား။
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံမှ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကို စတင် လျှောက်လှမ်းလိုက်ပြီဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို Read more »